Liverpool oo dheereysatay Hogaanka horyaalka Xilli Guuldarro ay soo gaartay Manchester City…iyo United oo gaartay Guushii labaad oo xariira+SAWIRRO – Gool FM
( Premier League ) 26 Dis 2018. Liverpool ayaa geedka hore u fuushay kaddib markii ay guul muhiima ka gaareen Newcastle cayaar ku idlaatay 4-0.
Kullanka ayaa qeybta hore lagu kala maray 1-0 oo ay ku hogaanka ku heysay Liverpool, waxaana goolka daah furka u dhaliyay Dejan Lovren markii dheeshu socotay 11-daqiiqo.
Dib markii loogu soo laabtay kaambiyaha labaad Maxamed Saalax ayaa goolka labaad Reds ugu dhaliyay Rigoore waana kisii 12-aad uu ka dhaliyo Premier League xagaagan.
Intaa kuma aysan ekaan hogaamiyaasha oo waxaa goolka seddaxaad u dhaliyay Xherdan Shaqiri daqiiqadii 79-aad halka uu soo afjaray goolasha Liverpool Fabinho markii cayaartu ay ka harsaneed 5-daqiiqo oo qura.
Guusha ayaa kaga dhigan Liverpool in hogaanka ay ku qabtaan 6-dhibcood iyadoo ay kusoo xigto Tottenham oo 5-0 ku xasuuqday Bournemouth.
Dhanka kale Manchester City ayaa qasaaro 2-1 kala soo hoyatay Liecester City oo ay marti u ahaayeen.
Dheesha ayaa qeybta hore lagu kala maray 1-1, waxaana hogaanka kullanka qabatay City oo waxaa goolka daah furka kullanka dhaliyay Benando Silva balse durbadiiba Liecester ayaa la timid goolka bar-baraha oo waxaa goolka u gaaray Marc Albrighton.
Dhammaadka qeybta labaad ee kullanka ayay u suura gashay in kooxda guriga iney helaan goolka guusha waxaana u dhaliyay Ricardo Pereira xilli City gabagabadii kullanka uu casaan ka qaatay laacibka Fabian Delph.
Guuldarrada city ayaa uga dhigan iney haatan ku jiraan kaalinta seddaxaad ee kala sareynta horyaalka waxayna todoba dhibcood u jiraan hogaanka Liverpool oo 51-dhibcood leh.
Ugu dambeyn Manchester United ayaa guushii labaad oo xariira gaartay markii ay 3-1 ku dhaafeen kooxda Huddersfield Town.
Goolasha United ayay kaga mahad celinee xiddigaheeda qadka dhexe Nemanja Matic oo goolka daah furka dhaliyay iyo laba gool oo ka timid Paul Pogba halka naadiga martida uu goolka calanka waqti dambe u dhaliyay Mathias Jorgensen.
Qodob la yaab leh oo lagu arkay heshiiska Neymar uu ku la jiro PSG